UK oo ku biirtay Dowlado doonaya inay Saldhigyo Millateri ka furtaan Somaliland | Aftahan News
UK oo ku biirtay Dowlado doonaya inay Saldhigyo Millateri ka furtaan Somaliland
Hargeysa(Aftahannews)- Wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa Kenya ayaa qoray in dawladda UK ay ku soo biirtay dalalka Imaaraadka carabta oo saldhig millatari ka sameysanaya Berbera iyo Ruushka oo naawilaya inuu saldhig ka sameysto Saylac.
Warkan ayaa lagu sheegay in Xoghayaha Gaashaan-dhiga UK, Gavin Williamson uu Madaxweyne Muuse Biixi, oo uu kula kulmay Hargeysa ay ka wadahadleen sidii loo sii xoojin lahaa xidhiidhka labada dal. Safaarrada Somaliland ku leedahay Nairobi may beenin, mana ay xaqiijin in UK doonayso inay saldhig millatari ka sameysato Somaliland.
Safiirka Somaliland u fadhiya Kenya, Baashe Cawil Cumar, ayaa sheegay in dalkiisu uu ku faraxsan yahay booqashadii Xoghayaha Gaashaan-dhiga Ingiriiska, waxaanu tilmaamay in socdaalkaasi sii xoojinayo dedaalka ay Somaliland ku raadinayso Aqoonsi caalamiya. Waxa kaloo uu danjire Baashe Cawil sheegay in socdaalkii Xoghaye Gavin Williamson uu tusmaynayo in bulshada caalamku ay garwaaqsatay muhiimada Somaliland.